ပြင်ညာဒက် – Min Thayt
လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက ပြင်ညာယှိဂျီးများ၊ ပြင်ညာဒက်ဂျီးများ
အလေ့အကျင့်မှသည် အလေ့အထသို့ ဆိုတဲ့စကားကို ကျနော့်အဖေဆီကနေ ကျနော်ပထမဆုံး ကြားဖူးခဲ့တယ်။ ဒီစကားဟာ ကျနော့်ကလေးဘဝကတည်းက စွဲစွဲမြဲမြဲနှစ်ဝင်နေပါတယ်။ အလေ့အထဆိုတာတွေက၊ အလေ့ အကျင့်ကနေ တစ်ဆင့်ဖြစ်လာတာ။ အလေ့အကျင့်ဆိုတာလည်း နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်နေရတာ။ ဒီလိုနဲ့ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အလေ့အထတွေ မတူဖြစ်လာပါတယ်။
• အလေ့အကျင့်ကအနေ အလေ့အထ
• အလေ့အထကနေ အကျင့်
• အကျင့်ကနေ စရိုက်
• စရိုက်ကနေ ဘဝ…. ဆိုပြီး ဖြစ်လာတယ်လို့၊ ကျနော် မြင်မိတယ်။
ဘဝဆိုတာ စိတ်ရဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှု…. ဆိုတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ကို ဆရာတော်ဦးဇောတိက စာအုပ်ထဲက ဖတ်ရတယ်။ အဲဒီ့နောက်ပိုင်းဘဝ ဆိုတာကို ကျနော် ပိုပြီး တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာတယ်။ ဘဝဆိုတာတွေက ဘယ်လိုဖြစ် လာသလဲ။ စိတ်ကိုပြောင်းရင် ဘဝကို ပြောင်းနိုင်တယ်။ စိတ်ကိုပြင်ရင် ဘဝကိုပြင်နိုင်တယ်။ စိတ်အရည်အသွေး ဆိုတာ ဘဝအရည်အသွေးနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျတယ်။ ဒီယူဆချက်တွေက ကျနော့်ဆီမှာ နှစ်ဝင်နေပါတယ်။
ကားမတ်(ခ်)က ကမ္ဘာလောကကြီးကို ပြောင်းချင်ကို ခင်ဗျားအမြင်ကို အရင်ပြောင်းပါလို့ ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ အမြင် ပြောင်းရင် ဘာပြောင်းမှာလဲ။ အမြင်ကို ပြောင်းအောင်လုပ်ရင် အယူအဆ၊ သဘောထားကို ပြောင်းအောင်လုပ် နိုင်တယ်။ အမြင်၊ သဘောထား၊ အယူအဆကို ပြောင်းတာဟာ စိတ်ကိုပြောင်းတာ မဟုတ်ဘူးလား။ စိတ်ကို ပြောင်းရင် အပြုအမူကို ပြောင်းနိုင်တယ်။ အပြုအမူကနေတစ်ဆင့် အလေ့အကျင့်ဆိုတာ ဖြစ်လာတယ်။ အလေ့ အကျင့်ကနေ အလေ့အထ၊ အလေ့အထကနေ အကျင့်စရိုက်။ အကျင့်စရိုက်သည်ပင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝ ဖြစ်လာတယ်မလား။
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ အကျင့်စရိုက်တွေ မတူဘူး။ အကျင့်စရိုက်တွေ ကွာဟသွားလို့ ဘဝတွေ ကွာဟသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝကို ပြဌာန်းတဲ့အကျင့်စရိုက်ကို ဘယ်အရာက လွှမ်းမိုးပြုပြင်သလဲ။ ဘဝရဲ့ အမြင်က ပြုပြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝရဲ့အယူအဆ၊ ဘဝအပေါ်ခံယူချက် စတဲ့အရာတွေက ဘဝကို လွှမ်းမိုး ပြုပြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝကို ပြောင်းချင်ရင် စိတ်ကို ပြောင်းမှရတယ်ဆိုတာ သိပ်မှန်လိုက်တာ။ စိတ်ကို ပြောင်းနိုင်ရင် အမြင်ကို ပြောင်းနိုင်တယ်။ ဒါဆိုရင် ကမ္ဘာလောကကြီးကို ပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက် အထောက်အပံ့ ကောင်းဖြစ်ပြီ။
အမြင်ပြောင်းနိုင်ဖို့ ဆိုတာသိပ်ခက်တယ်။ အထူးသဖြင့် လူဟာ အသက်ကြီးလာရင် ပြောင်းဖို့ ခက်သွားတယ်။ သူဆွဲကိုင်ထားတဲ့အယူအဆကို လက်သီးဆုပ်မဖြည်ချင်တော့ဘူး။ ဘဝမှာ သူလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့အမြင်ကို ပြောင်းလဲလက်ခံဖို့ ခက်သွားပြီ။ ဒီတော့ လူတစ်ယောက်အမြင်အယူအဆတွေ ပြောင်းဖို့ ဆိုတာ သိပ်ခက် တယ်။ ခါးသီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ထရော်မာတွေရခဲ့တဲ့ အသက်ကြီးလာသူတွေအတွက် အမြင်ပြောင်းဖို့ ဆိုတာ သိပ်ခက်သွားပြီ။ အမြင်ပြောင်းဖို့ခက်ရင် သူတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေ၊ အမူအကျင့်တွေ၊ သူတို့ရဲ့အလေ့အထ တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့စရိုက်တွေကို ပြောင်းဖို့ သိပ်ခက်သွားပြီ။
ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အခြေခံက အမြင်ယူဆချက်ပြောင်းလဲခြင်းက ဖြစ်ပါတယ်။ အမြင်အယူအဆကိုမှ မပြောင်းလဲ သေးရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းကို မျှော်လင့်လို့မရဘူး။ အမြင်သဘောထားကိုမှ မပြောင်းနိုင်သေး ရင် ၊ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ပြောင်းလဲဖို့ ခက်သွားပြီ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းဟာ အမြင်အယူ အဆတွေ ပြောင်းလဲခြင်းကနေ စပါတယ်။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ အမြင်အယူအဆပြောင်းလဲရေးကို ဘယ်လို လူတန်းစားတွေက ဦးဆောင်နေပါသလဲ။ နည်းပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ ကျနော်တို့ဟာ အမြင်အယူအဆသစ်တွေကို ဖလှယ်ခွင့်၊ လေ့လာခွင့်၊ စူးစမ်းခွင့် ရနေပါတယ်။ ဒါဟာ အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကျနော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဦးဆောင်အလွှာဖြစ် တဲ့ ပညာတတ်လူတန်းစားအလွှာဟာ ပျက်စီးနေတယ်။ ယုတ်လျော့နေတယ်။ အရည်အသွေးနိမ့်နေတယ်။ ပညာတတ်ဆိုတာကို တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့သာ ပြောလို့ရကောင်းနေတယ်။ လူတန်းစားအလွှာလိုက် ပြောဖို့ ခက်နေတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရောနေသလို၊ အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရောတွေ များနေပါတယ်။
ပညာတတ်လို့ ပြောရင် မည်ကာမတ္တဘွဲ့ရတွေ များနေတယ်။ တတ်ယောင်ကား ပညာတတ်တွေများနေတယ်။ မဟာပြင်ညာယှိကြီးတွေ များပြားနေပါတယ်။ ပညာတတ်အလွှာထဲမှာ စုန်းပြူးတွေ များနေတယ်။ ဒါဟာ လူမှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မအောင်မြင်ရခြင်း အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။
ပညာတတ်တွေကို သင်းသတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောရင် နဂိုက ကျနော် လက်မခံချင်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် အခုတော့ လက်ခံပါပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အတိတ်မှာ ပညာတတ်ကို ကြောက်ခဲ့တဲ့ လူတန်းစားအလွှာအားကြီးခဲ့လို့ဖြစ်ပါ တယ်။ လူတော်ကို ကြောက်တယ်။ လူတော်ကို လန့်တယ်။ လူတော်ကို မနာလိုမရှုစိမ့်လည်း အားကြီးခဲ့ပါတယ်။ ပညာတတ်အလွှာထဲမှာတောင် ကိုယ့်ထက်တော်သူကို မချီးမြှောက်နိုင်တဲ့လူတွေ မြောက်မြားစွာ ရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ ဒီလိုအမူအကျင့်မျိုးရှိတဲ့သူတွေက ပညာတတ်လောကကို ဦးဆောင်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောရင် ခင်ဗျား ယုံချင်မှ ယုံပါလိမ့်မယ်။ ယုံချင်ရုံ မယုံချင်နေ။ ကျနော်ကတော့ ယုံတယ်။
ပညာတတ်ဆိုသူတွေဟာ အခုခေတ်မှာတော့ မရှားတော့ဘူး။ လေ့လာခွင့်၊ ဆည်းပူးခွင့်၊ သင်ယူခွင့်၊ ဖတ်ခွင့် မှတ်ခွင့်တွေ အများကြီးရလာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခု မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ပညာတတ်သူတွေ ပိုများလာ ပါတယ်။ အသိအမြင်များပြားသူတွေ ပိုများလာပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ပညာတတ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူထားတဲ့ သူတွေထဲမှာ အတိတ်က လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့စရိုက်အတိုင်း ရှိနေတဲ့သူတွေ မြောက်မြားစွာ ရှိနေပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ပညာတတ်အလွှာရဲ့ အမူအကျင့်နဲ့ စရိုက်ကို အကဲဖြတ်သင့်တယ်။
လူထုဟာ မညံ့တော့ဘူး။ လူထုဟာ မျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်လာပြီ။ လူထုဟာ မျက်စိလျင်ပြီး နားပါးသူတွေ ဖြစ်လာပြီ။ သေချာကြည့်ရင် မြင်ပါတယ်။ ပညာတတ်ဆိုသူတွေရဲ့ အမူအကျင့်နဲ့ အလေ့အထ ၊ စရိုက်တွေဟာ ဘယ်လောက်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသလဲ။ ဒါဟာ အခု ကျနော့်တို့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေအနေကို ပြောပြနိုင် ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ခင်ဗျားဟာ စာအုပ်တွေထဲက ကျမ်းကြီးကျမ်းခိုင်တွေကို ရှာကြံဖတ်မှတ်နေစရာ မလိုပါဘူး။ ခင်ဗျားနဘေးမှာ ပညာတတ်လို့ ခံယူထားတဲ့လူတစ်ချို့ရဲ့ အမူအကျင့်နဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို မျက်စိရှင် ရှင်ထားပြီး နည်းနည်းလေး အာရုံစိုက်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အဖြေရပါလိမ့်မယ်။
လက်ရှိမြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ၊ ပညာတတ်လူတန်းစားအလွှာရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေရဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ….
• ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလူသိများပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေဟာ ၊ အနာဂတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်ချက်တွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ည ၈း၁၈
၄ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၊ ၂၀၂၀
Previous post ကြိုးနီ ဖျက်ပါ။ သွေးမုန်တိုင်း တိုက်ပါ။
Next post လွတ်လပ်မှု အင်ပါယာ